Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada badda Turkiga oo Muqdisho yimid |
Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada badda Turkiga oo Muqdisho yimid
Khamiis, June 05, 2014 (HOL) — Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka badda dalka Turkiga, Admiral Murad ayaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray, isagoo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa badda iyo wasiirka gaashaan-dhigga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Kulanka labada dhinac ay yeesheen ayaa wuxuu ka dhacay wasaaradda difaaca Soomaaliya, iyadoo saraakiishan Turkiga ay kala hadleen kuwa Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca ciidamada ee labada dal u dhexeeya.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Jen. Daahir Aadan Cilmi (Indho-qarshe) ayaa uga warbixiyay saraakiisha howlaha ay qabtaan ciidamada xoogga dalka, isagoo sheegay in iskaashiga labadan dalka ee dhinaca ciidan uu muhiim u yahay Soomaaliya.
Sidoo kale, Admiral Murad ayaa dhankiisa sheegay in Turkiga ay ka go’an tahay inay taageero dhinaca ciidamada ah siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan dhismaha ciidamada badda Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan ilaalinta xeebaha dalka.
Booqashadan ayaa waxay jawaab u ahayd booqasho uu kal hore ku tagay dalka Turkiga taliyaha ciidamada badda Somalia, Jen. Madey Nuurow Ufuroow, iyadoo tani ay qayb ka tahay xoojinta iskaashiga dhinaca ciidamada ee labada dal.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu casuumay inuu booqdo markab kuwa dagaalka ah oo ay wateen wafdigan oo ku sugan xeebaha dalka Soomaaliya.
Turkiga ayaa waxaa kaga sugan Soomaaliya hay’ado badan oo wada howlgallo dib loogu dhisayo dalka, sidoo kalena waxay ka wadaan Somalia howlo dhinaca ah oo ay ku caawinayaan dowladda iyo shacabka Soomaaliya.
– See more at: http://www.hiiraan.com/news/2014/jun/wararka_maanta5-46889.htm#sthash.dzCEvm6B.dpuf buy Viagra Plus, Zoloft withoutprescription.